08 October 2018, 00:34
Source: Soomaaliya - VOA
Xisbi uu hoggaaminayo Xasan Sheekh oo lagu dhawaaqay
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay Munaasabadda lagu daah furayay Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka (UPD) iyo caleema saarka Guddoomiyaha KMG ee Xisbigaas Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Roobow oo isku sharxay madaxweynaha K/Galbeed
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansoor, ayaa maanta magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay kaga dhaawqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
WASHINGTON. D.C — Dhegayso Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo ay idin la socodsiinayaan Caasha Cuud iyo Ibraahim Daandurey.
Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Todobaadka
Ku soo dhawaada barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka, oo uu inoo soo jeedinaayo Jamaal Axmed Cismaan.
WASHINGTON DC- Mudooyinkii u danbeeyey gobolka geeska Africa waxa ka dhacayay isbadalo isdaba joog ah oo qaarkood ay lama filaan ahaayeen sida colaadii dhex taalay dalalka Ethiopia iyo Eritrea, waxaanay dadka qaar qabaan in isbadalaasi ay dabada ay gacan ku lahaayeen quwado aan ahayn dalalkani. Hadaba maxay isbadalaadaasi ku soo biirin karaan siyaasada geeska? sidoo kale Soomaalida oo leh dhaqan soojireen ah oo ay ku soo caano maaleen , siyaasada iyo dhaqanku ma yihiin laba isla jaanqaadi kara? Wariyaha VOA Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa arimahaasi ka waraysatay Abiib Axmed Xirsi oo ka shaqeeya arimaha nabada iyo xalinta khilaafaadka islamarkaana ka mid ah aasaasayaasha urur maxali ah oo lagu magacaabo CCBRS kana hawlgala Somaliland oo Studio-ga VOA ee Wshington nagu soo booqday.
Warbixin: Halkee ayuu ku danbeeyey Wariye Jamal Khashoggi
Mas’uuliyiinta dalka Turkiga ayaa laga soo xigtay inay aamisan yihiin in la dilay suxiga Jamala Khashoggi oo u dhashay dalka Sucuudiga oo la waayey afar maalmood ka hor
Dhageyso, Barnaamijka Wicitaanka
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha, todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay: Xadgudubyada loo geysto Haweenka. Waxaa ku marti ah Batuulo Sh. Axmed Gabballe, Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka.
Hiiraan: Beelo Dagaallamay oo Nabad Loogu Baaqay
15 April 2018, 23:18
Xiisad colaadeed ayaa wali ka jirta degaanno hoostaga degmada Maxaas ee dobalka Hiiraan.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee Toddobaadka waxaad ku dhageysan doontaas qoddobo ay ka mid yihiin khilaafkii baarlamaanka Somalia iyo qoddobo kale.
Faaqidaadda: Khilaafkii Baarlamaanka iyo Saameyntiisa Dowladnimada
Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo aan ku eegeyno xiisaddii baarlamaanka Soomaaliya ka dhaxeysay waayadan, iyo waxa uu khilaafkaasi uga dhigan yahay dowladnimada Soomaaliya.
Banaamijka Martida: Waxaa Marti Ku Ah Deq Cumar
Barnaamijka Martida waxuu todobaadkan xoogga saarayaa khilaafkii Baarlamaanka ee uu ku baxay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cusman Jawaari.
Muqdisho: Shir Lagaga Hadlay Amniga
Ra'iisal Wasaaraha Somalia, Xasan Cali Kheyre ayaa shir-guddoomiyey kulan lagaga hadlayey amniga Muqdisho oo ay qeyb ka ahaayeen taliyeyaasha ciidamada iyo guddoomieyaasha degmooyinka Muqdisho
Naciima Qorane oo 3 Sano oo Xabsi ah Lagu Xukumay
Abwaan Naciimo Qorane ayaa maanta maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa waxay ku xukuntay 3 sano oo xadhig ah, kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in lagu helay danbi ah hadallo cay ah oo ka dhan ah Somaliland.
Muqdisho: Shirka Ahlu Sunnah oo Lagu Cambaareyey Xag-jirnimada
Magalaada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shir caalami ah oo laba maalin socday, shirkan oo ay ka soo qaybgaleen culumaa'uddiinka ahlu Sunnah wal Jamaaca ee qaar dalalka Muslimka ah.
Wada Hadal u Bilowday Soomaaliya Iyo Imaaraadka
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inuu jiro wada hadal toos ah oo ka dhex bilowday Somaliya iyo Imaaraadka Carabta.
UAE: Waan Joojinay Tababarkii Ciidamada Somalia
Sarkaal lagu Dilay Muqdisho
Warar ka imanaya magaalada Muqdishu ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan booliiska, qaybta baarista lagu dilay degmada Yaaqshiid. Sarkaalkan ayaa ka tirsanaa xarunta CID waxaana goobta ka baxsaday kooxdii dilka geesatay.